बेहुलीको मण्डपमा मृत्यु भएपछि बेहुलाले गरे बहिनीसँग विवाह :: Times of Pradesh
बेहुलीको मण्डपमा मृत्यु भएपछि बेहुलाले गरे बहिनीसँग विवाह
एजेन्सी । विवाह भइरहेका बेला बीचमा नै बेहुलीको मृत्यु भएपछि बेहुलाले बेहुलीकी बहिनीसँग विवाह गरेका छन् । यो घटना गत हप्ता भारतको उत्तर प्रदेशमा घटित भएको हो ।
बेहुली अचानक विवाह मण्डपमा ढलेपछि बोलाइएका डाक्टरले सुरभीको मृत्यु भइसकेको घोषणा गरिदिए । बेहुलीको मृत्यु भएपछि विवाह रोक्नुको साटो दुबै परिवारले विवाहलाई निरन्तरता दिने सोचे । यसका लागि बेहुला मनोज कुमारलाई सुरभीकी बहिनी निशासँग विवाह गरिएको छ । ‘यस्तो अवस्थामा के गर्ने के नगर्ने भनेर निर्णय नै गर्न सकिएन । दुबै परिवार सँगै बसेर बेहुलालाई मेरी बहिनी विवाह गरिदिने कुरा भयो,’ सुरभीका दाइ सौरभले भने ।
कुमार र निशाको विवाह भइरहँदा सुरभीको शवलाई कोठाभित्र राखिएको थियो । सुरभीका काका अजब सिंहले यस्तो निर्णय लिन निकै गाह्रो भएको बताउँदै परिवारले यस्तो मिश्रित भावना कहिल्यै अनुभव गरेको थिएन । ‘मृत्युले पीडा निम्त्याएको छ र विवाहले खुसी । यसलाई कसरी मिलाउने थाहा छैन,’ उनले भने । यो घटनाले भारतमा निकै विवाद निम्त्याएको छ । धेरैले यसबारे प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘कस्तो भद्रगोल । विवाहको दिन कसैको मृत्यु भएको छ । मृतक बेहुलीमाथि सम्मान दिनु पर्दथ्यो कि पर्दैनथ्यो ? मलाई त डर लाग्यो,’ एक ट्वीटर प्रयोगकर्ताले लेखे । अर्काले लेखे, ‘उनीहरुले प्रेमका कारण विवाह गरेका होइनन् रु यो निकै पुरानो अवधारणा होइन र ? कसैले ती बहिनीलाई सोध्नुपर्छ भनेर विचार गरे ?’
यो घटना चीनको माइक्रोब्लगिङ साइट वेबोमा पनि चर्चित भयो । जहाँ प्रयोगकर्ताले बहिनीको अधिकारबारे याद गरे नगरेको र उनलाई विवाह गर्न मन लागे नलागेको कुरा उठाए । अर्का एक प्रयोगकर्ताले कुमारले बहिनीसँग विवाह गर्नका लागि सुरभीको अन्तिम संस्कारसम्म कुर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । कतिमा यसमा दाइजो कुरामा पनि हुनसक्ने बताउँदै बेहुला पक्षले दाइजो फिर्ता दिन नमानेपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो कि भनेर पनि आँकलन गरे । रातोपाटीबाट